HORDHAC: Barcelona v Celta Vigo – Gool FM
HORDHAC: Barcelona v Celta Vigo
( La liga ) 22 Dis 2018. Barcelona ayaa soo dhaweyneysa Celta Vigo kulamada 17-aad ee La liga Asbuucan.
Hogaamiyaasha ayaa ku raaxeysanaya guulo kulamadii u dambeysay waxayna ku hami weyn iney dheereysteen dhibcaha hogaanka.
Garsooraha: Eduardo Prieto Iglesias
Thomas Vermaelen ayaa maqnaan doona muddo bila kaddib dhaawac markii uu dhaawacmay kullankii u dambeyay.
Nelson Semedo iyo Sergi Roberto ayaa labaduba shaki ku jiraa, laakiin mid kood ayaa la fili karaa inuu booska daafaca midig ka dheelo.
Arturo Vidal ayaa la filayaa inuu kusoo bilaawdo shaxda kowaad ee qadka dhaexe iyadoo laga doorbidayo Arthur.
David Junca waa ka ganaax kooxda martida, taasoo loo arko in Junior Alonso uu kusoo bilaaban doono dambeedka bidix.
Fran Beltran ayay suuragal tahay inuu diyaar noqdo isagoo kala wareegaya booska qadka dhexe Jozabed.
Sofiane Boufal iyo Brais Mendez ayay suuragal tahay iney kasii sheelaan garbaha weerarka.
Barcelona ayaa shabaqa ilaashatay seddax kulan oo xariira LaLiga iyagoo eegaya iney kullankii afaraad oo xariira ay ilaashtaan goolka markii u horreysay tan iyo January 2018.
Barcelona ayaa dhalisay 100-gool oo horyaalka 2018, tasoo ka badan goolasha ay dhalisay koox kasta oo ka dhisan shanta horyaalka qaarada yurub ugu waa weyn.
Barcelona ayaa laga dhaliyay 19-gool 16-kullan ee ilaa hadda la dheelay La Liga ololahan, waa rikoodkoodii ugu xumaan xagaagan tan iyo 2003/04 oo laga dhaliyay 21-gool.
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolal badan waana 33-gool mar loo eego cayaariyahanada kale waa mid ka badan LaLiga iaydoo gooldhaliyaha Celta Iago Aspas ayaa isna dhaliyay goolal ka badan cayaariyahanada u dhashay Spanish 2018 waana 21-gool.
Celta de Vigo ayaa shabaqa ilaashatay labo kamida afar kulan uu maamulay Miguel Cardoso (2 guul, kullan bar-baro iyo kullan guuldarro), taaso ka badan 12-kullan oo ay shabaqa ilaashan waayeen intii uu leylinayay Antonio Mohamed (3 guul, 5-bar-baro iyo 4 qasaaro).
Lixdii kulan ee u dambeysay waxaa kasoo baxday laba guul iyo 2-bar-baro. Celta ayaa qasaartay seddax kamida afar dheel oo ay u safreen Camp Nou inkastoo, laga dhaliyay 5-gool iyo wax ka badan mid kasta oo ay guuldarreysteen.
Ma jiro cayaariyahan ka dheela horyaalka LaLiga ee goolal badan ka dhaliyay Barcelona shantii kullan ee u dambeysay uu ka hor yimid laacibka Celta Iago Aspas waana shan gool todoba cayaar uu la kulmay Barca.
HORDHAC: Cardiff v Manchester United
HORDHAC: Juventus v AS Roma